Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Blood Pressure Sudden Increase သွေးတိုး မေးခွန်း
Blood Pressure Sudden Increase သွေးတိုး မေးခွန်း
Wed, Aug 14, 2013 at 2:40 PM
ကျမရဲ့ဦးလေးက အသက် ၆ဝ ပါ။ ရုတ်တရက် သွေးအရမ်းတိုးလာရင် ဘယ်လိုလုပ်ရသလဲဆရာ။
၁။ လူရောစိတ်ပါ နားလိုက်ပါ။
၂။ သောက်နေကျ သွေးတိုးကျဆေးထဲက ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးပါတာကို ချက်ချင်းသောက်ပါ။
၂။ အဲလိုပါတာမရှိရင် -
1. Thiazide diuretics include:
2. Loop diuretics include:
3. Potassium-sparing diuretics include:
• Eplerenone (Inspra)
• Triamterene (Dyrenium) ထဲက တမျိုးမျိုးချက်ချင်းသောက်ပါ။ ၁ ပြားတည်းရတယ်။
ဆီးသွားလာတာနဲ့ သွေးဖိအားကျမယ်။ ရေနွေးကြမ်း၊ အုန်းရည်သောက်ပါ။ လိုအပ်ရင် အနီးဆုံးဆရာဝန်ကိုပြသပါ။
• Hypertension (1) သွေးတိုးရောဂါ (၁) http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2008/10/high-blood-pressure.html • Hypertension (2) သွေးတိုးရောဂါ (၂) http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/06/hypertension.html စာတွေကိုလဲဖတ်ပြီး လိုအပ်တာကို လိုက်နာပါစေ။
သွေးတိုး ရုတ်တရက် တက်လာတာဟာ ခဏတာသာဖြစ်ရင် သိပ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ တက်နေတာ ရက်ကြာလာပေမဲ့ ပြန်မကျနိုင်ရင်တော့ အထူးသတိထားပါ။ သွေးဖိအားဆိုတာ အမြဲမပြတ်ပြောင်းလဲနေတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အခုတိုင်းပြီး ခဏနေပြန်တိုင်းရင် မတူပါ။
သာမန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အတက်-အကျတွေ မဟုတ်ရင် သွေးဖိအားဟာ ဒီဟာတွေကြောင့် များလာစေနိုင်တယ်။
• Hormones တချို့ ဟော်မုန်းတွေ၊ • Kidney disease ကျောက်ကပ်ရောဂါတွေ၊
• Pregnancy ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိုယ်ဝန်၊
• Stress and Anxiety စိတ်ဖိအားများတာနဲ့ စိုးရိမ်စိတ်ကဲခြင်း၊
• Birth control pills ကိုယ်ဝန်တားဆေးတချို့၊
• NSAIDS အများသုံး အနာ-အကိုက်ပျောက်ဆေးတွေ၊
• ဆေးဝါးတွေထဲမှာ Cocaine ကိုကိန်းနဲ့ Amphetamines ရာဘ (ယဘ) ဆေးတွေလဲပါတယ်။
• Salt Consumption ဆားစားတာများခြင်း၊
• Smoking ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊
Quick Response Medications သွေးတိုးအမြန်ကျဆေးများ
• Diuretics ခေါ်တဲ့ ဆီးသွားစေတဲ့ဆေးကိုသုံးတာများတယ်။ ဒါကြောင့် Water pills လို့ခေါ်ကြတယ်။ ဆီးသွားလိုက်တာနဲ့ သွေးထုထည်ကျပြီး ဖိအားပါကျစေတယ်။ လူကတော့ အားယုတ်တာခံစားရမယ်။ ခံနိုင်ပါတယ်။
• Beta-blockers (ဘီတာဘလော့ကား) ဆေးကလဲ နှလုံးကိုသွားတဲ့ အာရုံကြော nerve impulses ကို နှေးပေးတယ်။ သတိထားဘို့က သွေးခုန်နှုန်း နှေးနေသူကို မပေးရပါ။
• ACE inhibitors (အေစီအီး အင်ဟဘစ်တာ) ဆေးလဲ သုံးတယ်။ အသင့်အတင့်မြန်တယ်။ သွေးလွှတ်ကြောတွေကို ကျယ်စေတယ်။
• Calcium channel blocks ဆေးကလဲ အဲလိုသဘောရှိတယ်။ (ကယ်လ်စီယမ်) ဓါတ်ကို နှလုံးနဲ့ သွေးကြောတွေက ကြွက်သားတွေဆီလာမှာကို တားပေးတယ်။
Types of Blood Pressure Medications သွေးတိုးကျဆေး အမျိုးမျိုးကို အစဉ်လိုက်သုံးတယ်။
4. Angiotensin antagonists
5. Calcium channel blockers (CCBs)
8. Nervous system inhibitors
စာတွေကိုလဲဖတ်ပြီး လိုအပ်တာကို လိုက်နာပါစေ။ ဒေါက်တာတင့်ဆွေ